Ifulethi elihle elisenkabeni yedolobha w/Netflix - I-Airbnb
Ifulethi elihle elisenkabeni yedolobha w/Netflix
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Jodie
I-Regency Apartment Enhle enkabeni ye-Leamington Spa
IPortland Street Apartment iyisitezi esiphansi sesitayela se-regency khona kanye enhliziyweni ye-spa yaseLeamington. Ukude nemizuzu ekukhetheni okuhle kwezitolo zekhofi, izindawo zokudlela, imigoqo, icinema namapaki
Indawo yokuhlala enepulani evulekile iyindawo enhle kulabo abafuna ukujabulela ukuba ndawonye. Umuntu angapheka kuyilapho abanye bezoziphumulela kusofa babukele umabonakude kuyilapho bexoxa ngosuku ndawonye. Khona-ke kamuva ngemva kwesidlo sakusihlwa nibambene kusofa ndawonye noma cha futhi nijabulele i-Netflix!
Ikhishi elihlome ngokuphelele elinomshini wokuwasha izitsha, umshini wokuwasha, isiqandisi esikhulu sefriji, ihhavini, i-microwave, i-toaster neketela, kanye nezitsha nezinto zokugezela ezinikeziwe. Uzothola umshini we-Tassimo nama-pods kanye netiye elikhethiwe, ikhofi noshukela, ngisho nokukhethwa kwamabhisikidi ongawajabulela lapho uziphumulele.
Igumbi lokulala liqukethe umbhede ophindwe kabili othokomele onedeski elisebenzayo kanye nesitimela esilengayo. Ifulethi libuye lihlomule ngombhede kasofa ukuze uthole indawo eyengeziwe
Ilineni, amathawula kanye nejeli yokugeza kunikezwa ukuze uyisebenzise.
Enhliziyweni yesikhungo sedolobha iRoyal Leamington Spa uzothola leli fulethi elihle lokulala elilodwa
Uzothola inqwaba yezitolo zekhofi nezindawo zokudlela ongakujabulela phakathi nokuhamba imizuzu nje. Uma ulithanda ikhofi lakho noma ungumuntu othanda ukudla kakhulu uzokujabulela ngempela ukuba lapha.
Ikhishi elihlome ngokuphelele elinakho konke okudingayo okomisa okowasha, isiqandisi esikhulu sefriji, ihhavini, i-microwave, i-toaster neketela, kanye nezitsha nezinto zokugezela ezinikeziwe. Uzothola umshini we-Tassimo nama-pods kanye netiye elikhethiwe, ikhofi noshukela, ngisho nokukhethwa kwamabhisikidi ongawajabulela lapho uziphumulele.
Amakamelo okulala aqukethe umbhede ophindwe kabili othokomele onedeski elisebenzayo kanye nesitimela esilengayo
Ifulethi libuye lihlomule ngombhede kasofa ukuze uthole indawo eyengeziwe
IPortland Street Apartment iyisitezi esiphansi sesitayela se-regency khona kanye enhliziyweni ye-spa yaseLeamington. Ukude nemizuzu ekukhetheni okuhle kwezitolo zekho…